Tattoo-ka magacyada carruurta, oo weligaa kula jira | Tattoo
Tattoos ee magacyada carruurta, weligaa kula jira
Ma aha Cherry | | Tattoos leh xarfo
Magaca tattoos farcankaaga waa mid ka reeban xaraashka magacyo leh. Sida aysan ahayn fikrad aad u wanaagsan in la sawiro magaca lamaanahaaga, maxaa dhici kara, isla sidaas looma dhihi karo carruurta, in wanaagga iyo xumaanta ay waligoodba halkaas ku sugnaan doonaan.
Maqaalkan waxaan ku eegi doonaa fikrado dhowr ah oo aan rajeyneyno inay kugu dhiirrigelin doonaan qaybtaada soo socota. Sii wad akhriska oo waad arki doontaa!
1 Magaca farcankaaga ul qallalan
1.1 Magaca oo ay weheliyaan xuduudo
1.2 Magaca ilmahaaga magacyadiisa ...
1.3 … Iyo warqad fudud
1.4 On jilbaha, ee ugu adag
1.5 Magaca qoorta
1.6 Taariikho muhiim ah oo ku xiga magacaaga
1.7 Magaca luqado kale
2 Tattoos magacyada leh sawirro iyo waxyaabo kale
2.1 Magaca oo ay weheliso ubaxyo, fursado badan
2.2 Magaca oo ay weheliyaan xiddigo, waad iftiimin doontaa!
2.3 Magaca oo ay weheliyaan raadad, naqshad aad u fiican
2.4 Ku duudduubtay quluub iyo xarig
2.5 Magaca iyo dhammaadka, naqshad kale oo caan ah
Magaca farcankaaga ul qallalan
Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' waxaad haysataa fursado ka badan waxa u muuqda jaleecada hore si aad u hesho naqshad aad u asal ah. Sidaa darteed, xitaa haddii ay u muuqato in magacu waxoogaa qallafsan yahay, waxaad ku ciyaari kartaa waxyaabo ay ka mid yihiin qorista qoraalka si aad uga dhigto mid ka duwan sidii hore.
Mid ka mid ah noocyada ugu isticmaalka badan waa Gothic, in kasta oo maskaxda lagu hayo in tani ay u shaqeyso naqshado waaweyn. Kuwa yar yar, far qoraal ah oo caqli badan, ama xitaa mid ku dayanaya qorista gacanta (ikhtiyaar ahaan asalka ah waa in la isticmaalo qoraalka gacmaha ilmahaaga) ayaa aad uga fiican.
Magaca oo ay weheliyaan xuduudo
Mid ka mid ah furayaasha ka dhigaya sawirkaaga mid gaar ah xulashada nooca saxda ah. Markaan saxno uma jeedno inay jiraan noocyo ka qurux badan kuwa kale, laakiin waa wax fiican inaad eegto nooca tattoos-ka aad rabto inaad ogaato midka aad dooraneyso. Tusaale ahaan, naqshad xuduudeed waxay ku shaqeyn kartaa wejiga khafiifka ah ee cinjirka ah, wax in taatuuga yar yari khatar ku keeni karto maxaa yeelay, waqtiga oo laga gudbo, sadarradu way isku soo biiri karaan midkoodba midka kale oo lumiyaa fiiqnaanta.
Magaca ilmahaaga magacyadiisa ...
In kasta oo haddii aad rabto naqshad yar, ikhtiyaar kale oo aad ku qiyaasi karto waa xarafyada ilmahaaga. Maaddaama ay tahay laba ama saddex xaraf oo keliya, waxay ku shaqaysaa qaabab fara badan, tusaale ahaan, khadad khafiif ah ama dhumuc leh, midab ahaan, madow iyo caddaan ah, oo leh qaab dhaqameed ...
… Iyo warqad fudud
Laakiin haddii aad runtii rabto naqshad sidaas iyo si fudud oo ku dhowaad qofna uusan ogeyn waxa loola jeedo, dooro kaliya inaad ku qorto hal xaraf magaca ilmahaaga. Xitaa maahan inay ahaato mid bilow ah, maxaa yeelay waxaad dooran kartaa, tusaale ahaan, xarafka loogu celceliyo badanaa magiciisa. Xullo naqshad yar haddii aad rabto gabal caqli-gal ah, in kasta oo sawirro waaweyn, oo xarafku ku jiro qaab gothic ka sii ballaadhan ama si fudud ka weyn, iyaguna aad u qabow yihiin.
On jilbaha, ee ugu adag
Ikhtiyaar kale, inkasta oo kaliya ugu adag uguna geesinimada badan, maaddaama tattoosyada ku yaal jilbaha wali ay leeyihiin macno gaar ah oo diidmo ah, waa in lagu sawiro magaca ilmahaaga qaybtan jirka. Waa wax aad u qabow oo leh xarfaha ku dayanaya qaab dhaqameedka, inkasta oo mid kale oo ka mid ah xaddidaadyadiisa ay tahay in magaca ilmahaagu aanu yeelan karin wax ka badan sideed xaraf (toban haddii aan tirinno suulka).
Mid ka mid ah meelaha aad ku noolaan karto magaca ilmahaaga maqaarkaaga ayaa ah qoorta. Meeshani waxay ku habboon tahay tattoo yar (Waxay ku taal dhabarka, laakiin qoorta si dabiici ah ayey u dejineysaa) iyo qaab xaraf leh. Sidoo kale waa ku habboon tahay kuwa doonaya naqshad aad iyo aad u caqli badan, maadaama ay si fudud ku qarsoonaan karto iyadoo timahaaga hoos loo dhigo.
Taariikho muhiim ah oo ku xiga magacaaga
Fikrad kale oo ah in naqshaddan la siiyo qallooc ayaa ah in lagu daro taariikh iyada la socota. Dooro maalin si gaar ah muhiim u ahayd (badiyaa maalinta dhalashadiisa ayaa la isticmaalaa, laakiin ha ka reebin xulashooyinka kale sida maalintii uu yiri eraygiisii ​​ugu horreeyay ama, haddii uu weynaado, maalintii uu qalin jabiyay) oo aad ku dhex qorto magaca, ama meel dhig.
Magaca luqado kale
Ugu dambeyntii, Kaliya ma dooran kartid naqshad ay halyeeyadu tahay magaca ilmahaaga ee afkeenna, waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad "u beddelato" jilayaasha qof kale. Tusaale ahaan, Carabi, Cibraan, Jabbaan ama Shiine waa qaar ka mid ah luqadaha ugu caansan noocyada noocaas ah.
Tattoos magacyada leh sawirro iyo waxyaabo kale
Qeybtan labaad ee fikradaha aan maanta u heyno astaamaha magacyada carruurta sidoo kale waxaa la socon kara waxyaabo kale iyo sawirro. Waa ikhtiyaarkaaga inaad go'aansato qofka qaadaya culeyska naqshadeynta, ha ahaato magaca (haddii ay dhici karto inuu ka weyn yahay sawirka) ama sawirka (haddii uu ka weynaan doono kana faahfaahin badan yahay magaca) . Fikradaha qaar waxaa ka mid ah daabacaadda gacmaha iyo cagaha, dabeecadda taxanaha ah ee uu aadka u jecel yahay, baashaalkiisa ciyaarta, dhalo ...
Magaca oo ay weheliso ubaxyo, fursado badan
Ubax waa mid ka mid ah sababaha waaweyn ee loo raaco astaamaha magacyada carruurta. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah ubax, laakiin haddii aad rabto naqshad aad adigu iska leedahay, waxaa kugu dhiirrigelin kara ubaxyadaas oo inta badan ku xusuusinaya ilmahaaga. Kani kuma koobna oo kaliya magaca, laakiin wuxuu tixraaci karaa sheekooyinka adiga iyo isagu oo keliya aad ogtihiin, tusaale ahaan, ubax uu si gaar ah u jeclaa, kaas oo uu ku jilay sawir ...
Magaca oo ay weheliyaan xiddigo, waad iftiimin doontaa!
Sababaha kale ee magaca ilmahaaga loo raaci karo waa xiddigaha. Waxa ugu fiican ee ku saabsan curiyehani waa inay u muuqato mid aad u wanaagsan labadaba xarfaha caadiga ah iyo kuwa kaleba, mid ka casrisan ama aan la arag. Maxaa intaa ka badan, waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican taabashada midabka, ama xiddigaha ama warqadda lafteeda.
Magaca oo ay weheliyaan raadad, naqshad aad u fiican
Dhinaca kale, iyo kuwa doonaya wax qurux badan oo laga yaabo inay ka xishoodaan ilmahaaga markuu weynaado (dhammaan sababaha loo doorto iyaga) ayaa ah inuu farahiisa ag dhigo magaca ilmahaaga, ama gacanta ama cag. Waa qaab fudud isla markaana isla markaa qaab shaqsiyeed aad u muuqda oo si gaar ah ugu muuqda lugta, haddii ay tahay cagaha, ama wadnaha ama gacmaha, haddii aad doorato sawirka gacanta.
Ku duudduubtay quluub iyo xarig
Fikrad kale oo aad ka qaadan kartid dhiirrigelinta naqshadeyntaada soo socota waa inaad ku hareeraysid magaca ilmahaaga quluub iyo xarig si aad ugu muujiso jacaylka aad u qabto isaga. Qalbiyadu, sida aad qiyaasi karto, waa naqshad aad loo jecel yahay, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah inay taageeraan naqshado badan oo kala duwan. Tusaale ahaan, waxay noqon karaan casaan, laakiin sidoo kale midabbo kale oo badan, oo leh qaab "nolol ah" iyo waliba anatomical. Ku waafaji dhadhankaaga iyo kan ilmahaaga si ay uga dhigaan gebi ahaanba naqshad shaqsiyeed!
Magaca iyo dhammaadka, naqshad kale oo caan ah
Infinity waa mid kale oo ka mid ah sababaha ugu caansan marka ay timaado sameynta tattoo. Si ka duwan wadnaha, ma laha naqshado aad u tiro badan oo aad ku heli kartid tattoo sameeya farqi. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeceshahay wax badan, ugu dambeyntii waxa lagu tirinayaa waa dhadhankaaga. Waad ka dhigi kartaa inuu ku habboon yahay magaca buuxa ee ilmahaaga, laakiin sidoo kale xarfaha, tusaale ahaan, waxaadna siin kartaa taabashada midabka.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku siiney fikrado wanaagsan oo ku saabsan astaamaha magacyada carruurta. Noo sheeg, wax ma haysaa? Waa maxay magacu? Noo sheeg wax kasta oo aad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tattoos ee magacyada carruurta, weligaa kula jira
Tattoo hooyada asalka ah iyo gabadha, fikrado badan
Saaxiibbada yaryar ee loo yaqaan 'tattoos', saaxiibtinimada ayaa ka sarreysa dhammaan